August 2009 ~ စန္ဒကူး
ရုံးပ်ိတ်ရက်တစ်ရက်မှာ အိမ်ဘေးက အန်ကယ်အန်တီတို့နဲ့ မောလ် တွေဆီပါသွားတာ.. သူတို့ က တော့nuts တွေလိုက်ရှာဝယ်တာနဲ့ ကူးကူးကတော့ ၀ယ်စရာထွေထူးမရှိတာမို့ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ ဓာတ်ပုံ လိုက်ရိုက်ပီးယူလာခဲ့ပါတယ်...
နံပြားလိုTortillas တစ်ထုပ်တော့ဝယ်ခဲ့တယ်။ နံနက်စာ အထဲမှာ ပဲ၊ အသီးရွက်နဲ့ cheese ထည့်လိပ်ပီး စားဖို့။ (သိပ်မကြာခင်မ၀ယ်စားတော့ဘူး..ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့အစီစဉ်ရှိတယ်..လုပ်ဖြစ်မှတင်တော့မယ်၊ ၀ယ်ရတာဘဲ ပို ကုန်မလား...ကိုယ်တိုင်လုပ်မှပိုကုန်မလာမသိဘူး..ဆင်ဖိုးထက် ချွန်းဖိုးကြီးနေလဲမကိုက်ဘူးလေ)
နှင်းဆီ ခရမ်းရောင် ပထမဆုံးတွေ့ဖူးချင်းပါ... အရမ်းလှတယ်...
ထမင်းစားပွဲပေါ်အလှတင်ဖို့လုပ်ထားတဲ့ ပုလင်းရှည်လေးထဲမှာ မုန်လာဥနီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးတွေ စီရီ ထည့်ထားတာလဲ ချစ်စရာလေးတွေ.... (လိုချင်သူများစာရင်းပေးနိုင်သည်..ပုလင်းအကြီးတော့ မရဘူး..သေးသေးလေးဝယ်ပေးမယ်)
သူတို့ရိုးရာအရုပ်တွေမဲတူးတူးနဲ့ (ကိုကြီးသူသာလျှင်တောင်သတိရမိသေး..ဟိဟိ) နားကွင်းကြီးတွေနဲ့ထိုင်နေတဲ့ သစ်သားရုပ်တုတွေ...သိမ်းဌက်တွေလဲလှတယ်...
အကြိုက်ဆုံးကတော့ မီးပုံးအနောက်က ချိတ်ထားတဲ့ အိကျီတွေပါ..နွေရာသီနဲ့တော့ တော်တော်အဆင်ပြေမှာ...
နေကြာစေ့တွေအများကြီးတွေ့လို့ ၀မ်းသာသွားတာ.. နောက်မှ ဌက်တွေအတွက် မှန်းသိတယ်.. မ၀ယ်လာပါဘူး.... (တောသူမလို့ပြောဖို့ချောင်းနေသူများသတိ)...
Healthy Option ဆိုတဲ့ဆိုင်မှာ organic productတွေဘဲရောင်းတယ်..အဲဒီမှာတော့ နေကြာစေ့အခွံနွှာပီးသား တွေကီလိုနဲ့ရောင်းတယ်.. ကူးလဲ အဲဒါတွေဘဲဝယ်စားတယ်.. အစိမ်းသက်သက်ဆိုတော့ အရသာတော့ ဘယ်ရှိ ပါ့မလဲ..အဲဒီတော့ ပန်းကန်လုံးလေးထဲကို ရေနဲနဲထည့်၊ ပဲငံပြာရည်နဲနဲထည့်၊ ချိုမှုန့် နဲနဲထည့်ပီး မွှေလိုက်တယ်။ ပီးတော့ နေကြာစေ့လေးတွေထည့်ပီး နှံ့အောင်ထပ်နယ်.. ပီးတော့ Microwave ထဲထည့် ၂၀ စက္ကန့်လောက်ဆို ထုတ်၊ အအေးခံစားလို့ရပီ..ကောင်းမှကောင်း... (မယုံရင်လုပ်စားကြည့်)
ပန်းလေးတွေအရမ်းလှတယ်.. ကျွန်မဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်နေချိန် သူများကြည့်ရင် မကြိုက်ဘူး.. လူတွေများတော့ တစ်ချို့နေရာလေးတွေကလွဲလို့ လူရှုပ်တော့ အမြန်ရိုက်ရတော့နဲနဲမှုန်သွားတယ်...
Posted by စန္ဒကူး at 8:45 AM
အခုတစ်ပတ်ကတော့နေရာပြောင်းတော့ ချက်ပြုတ်တဲ့တိုလီမုတ်စလေးတွေဘယ်အထုပ်ထဲ ထည့်မိမှန်းမသိဘူး။ ဟင်းချက်မယ်လုပ်မှ ကြက်သွန် ဖြူနီ လဲမတွေ့၊ ငရုတ်ဆုံလေးလဲမတွေ့၊ ဆားလဲမတွေ့ နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လိုက် တာ။ အိမ်ပြောင်းတော့လဲဒီလိုပါဘဲ။ ခဏပေါ့။ မြူးစ်ရဲ့ဘလော့ကမုန်ညှင်းဟင်းချိုလေးတွေ့တော့အားတက်သွား တယ်...
ဈေးနေ့က တောင်ပို့မှိုလား၊ တောမှိုတွေတောင်ပေါ်က အသည်တွေလာဆင်းရောင်းကြတာတွေ့လို့ဝယ်ထားတာ၊ သေချာတိုက်ချွတ်ဆေးကြောပီးရေခဲတဲ့အကန့်ထဲမှာထည့်ထားတာရှိတယ်။ မုန်ညှင်းစိမ်းလေးဝယ်ထားတာနဲနဲရှိ တာနဲ့၊ အမြန်ချက်လို့ရ၊ အဆင်လဲပြေမယ့်ဟင်းတစ်မယ် ဒီနေ့ နေ့လည်စာအဖြစ်စီစဉ်လိုက်ရပါတယ်။
ရုံးက function hall /cafe ထဲဝင်ပီး ကြက်သွန်ဖြူတစ်လုံးနဲ့ ဆားနဲနဲသွားတောင်းလာခဲ့တယ်။ မှိုကိုတော့ မနေ့ ညကတည်းက ရေနည်းနည်းနဲ့နွမ်းအောင် ဂျင်းအပြားလှီးထည့်ပီး နူးအောင်လုံးထားပီးသားမို့ မုန်ညှင်းကိုဘဲ ရေစင်စင်ဆေး၊ အနေတော်လှီးပီး..
ကြက်သွန်ဖြူကို ဟင်းချက်သုံးတူအသေးလေးနဲ့ ထုထားလိုက်ပီး ဆီသတ်၊ မုန်ညှင်းစိမ်း (အခါးမျိုးမဟုတ်) တွေကို ထည့် ရေထည့်၊ အရသာဆား၊အချိုမှုန့်ထည့်ပီး...ပွက်ပွက်ဆူလို့ နွမ်းရင်တော့ လုံးထားတဲ့ မှိုအကောင်လိုက် တွေကို မုန်ညှင်းဟင်းချိုထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ မှိုအကောင်လိုက်ဆိုတာက မှိုတွေကသန်သန်မာမာတွေ၊ မနွှာတော့ဘူး..ခေါင်းကနေခြေထောက်အထိအကုန်ထည့်ပြုပ်ထားလိုက်တာ။ အခုဆိုရင်တော့ လွယ်လဲလွယ်၊ မြန်လဲမြန်တဲ့ မုန်ညှင်းနှင့်မှို ဟင်းရည်သောက်လေးတစ်ခွက်ရပါပီ။ ငရုတ်ကောင်းလေးပါဖြူးလိုက်ပါအုံး...
Posted by စန္ဒကူး at 8:55 AM
အရင်နှစ်ပတ်လောက်ကဘလော့တစ်ကာလိုက်လည်ရင်း ကြောင်လျှာသီးကြော်၊ ဖုတ်၊ တင်ထားတာတွေ့တော့ စိတ်ကထိမ်းလို့မရဘူး.စားချင်တာအရမ်းဘဲ။ ဒါ..နဲ့ဘဲ.. မာမီက လူကြုံနဲ့ဘာထည့်ပေးရမလဲမေးတော့ jungle food တွေထည့်ပေးလိုက်ပါ လို့.. ကြောင်လျှာသီးလဲမမေ့ပါနဲ့လို့ မှာလိုက်တော့ သတင်းစာရွက်နဲ့ ထုပ်ထားတဲ့ ကြောင်လျှာသီး ၂ချောင်း၊ ဖန်ခါးသီး၊ ဇီးဖြူသီး၊ ဒညင်းဝက်ကြော် နဲနဲ နဲ့ ဆားမပါတဲ့ နေကြာစေ့ တွေရောက်လာ ပါတယ်။
ကြောင်လျှာသီးကိုတွေ့တွေ့ချင်းပျော်လိုက်သည်ဖြစ်ခြင်း၊ ရုံးကိုယူသွားပြီး..သူငယ်ချင်းတွေကိုအသီးရှည်နဲ့ နောက်က လိုက်ထိုးပီးစနေတာ.. သူတို့ကလဲ ဘာအသီးမှန်းမသိတော့အရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားပီး ၀ိုင်းအုံနေကြ တာ။ တစ်ယောက်ပီးတစ်ယောက်ဝိုင်းကိုင်လို့ STOP လို့ပြောထားရတယ်။ သူတို့ကမှ jungly countries.. တွေက လာကြာတာ.. :P..
၄ပိုင်းလောက် ၁ လက်မအတိုလေးတွေကိုတော့ microwave ထဲထည့်ပီး ဖုတ်လိုက်ပါသေးတယ်..
ထမင်းနဲ့စားမလားလို့ ဒီတိုင်းဘဲ ကိုက်စားပစ်လိုက်တော့တာပါဘဲ...း)
ကြောင်လျှာသီးလေးနဲ့ ထမင်းလေးနဲ့ ပဲဟင်းပူပူလေးရယ်.. ငရုတ်သီးထောင်းလေးရယ်နဲ့ စားရတာ ကောင်းမှကောင်းး..း)
အခုတစ်လော စိတ်တွေရှုတ်နေတယ်၊ မနက်ဆိုမထချင်ဘူး၊ ညဆိုမအိပ်နိုင်ဘူး...
ကျွန်မသီချင်းလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် မြှင့်လေ့ရှိတယ်.. ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ Blueberry ဆိုလားကောင်မလေး တွေ သီချင်းဆို၊ အိကျီဆင်တူဝတ် ပီး က နေတာလေးက ချစ်စရာလေးတွေ... ရုပ်တွေကခပ်ဆင်ဆင် ဆိုတော့ အမွှာနဲ့တောင်တူတယ်။ (စကားချပ်၊ ကူးကူးယောက်ျားယူရင်လဲ ကလေးဆို အမွှာဘဲလိုချင်ပါတယ်)
နောက်တော့ တွင်ကယ်လ် Twinkle သူ့အသံလေးကိုကြိုက်တယ်၊ ချောင်းသာသွားခဲ့တုန်းက ဟော်တယ်တစ်ခု တည်းမှာ အတူတည်းဖူးတယ်.. ချစ်စရာလေး... ပုပုလေး..
ကတာလဲ လုံးလုံးလေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်.. တော်ပါတယ်.. မကြည့်ရသေးသူတွေအတွက် ပါတင်ပေးလိုက် တယ်... (အကသင်ရင်ကောင်းမလားဘဲ..)
တွင်ကယ်လ် - သွားလိုရာသွားပေတော့
Posted by စန္ဒကူး at 8:36 AM
ကျွန်မမြန်မာပြည်ကထွက်လာတုန်းက ကြောက်ရွံစိတ်တစက်ကလေးမှမရှိပါဘူး။ ကျွန်မချစ်သူက ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေနဲ့ နိုင်ငံရက်ခြားမှာကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်ခဲတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာရယ်၊ လေယဉ်စီး ရင်ဘယ်လိုနေရမယ်၊ ခါးပတ်ကိုဘယ်လိုသတိထားရမယ်၊ အိတ်တွေကအစ၊ ပတ်စပို့..ကိုမိတ္တူကူးထားဖို့၊ လူများ စကားလာပြောတိုင်းမယုံဖို့ အချက်လက်တွေအများကြီးကို အသေးစိတ်ရေးထားပေးတဲ့ ၄ မျက်နှာစာရွက်ကို print ထုတ်ပီး ခပ်တည်တည်နဲ့ထွက်လာခဲ့တာပါ။ ဘန်ကောက်အထိသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အဖော်ပါလို့ check-in လုပ် တဲ့အခါ အဆင်ပြေပေမယ့် ကီလိုပိုလို့ ၄၀၀၀၀ လောက်ထပ်ပေးခဲ့ရသေးတယ်။ luggage အကြီးကြီးတစ်လုံး၊ အလတ် တစ်လုံး၊ ကွန်ပြူတာအိတ်တစ်လုံး၊ မှတ်မှတ်ရရ နန်းထိုက်တော်ဝင် က အင်းလေးချည်သားကို လက်ပြတ် လေးချုပ်ထားတာရယ်၊ ဘောင်းဘီရှည်အမဲ အဖြူစင်းကျားနဲ့ ၄ လက်မ ဒေါက်ဖိနပ်နဲ့ပါ၊ ဆံပင်က ကောက်ထားတာ ကိုပြန်ဖြောင့်ထားတဲ့ ကြွက်စုတ်ကေလေးနဲ့၊ TG နဲ့ လေယဉ်စတက်တော့ ပျော်လိုက်သည်ဖြစ်ခြင်း၊ ပေးသမျှအစာတွေစား၊ ရေတွေသောက်၊ မကြာလိုက်ပါဘူး ဘန်ကောက်ရောက်ရော... ဘန်ကောက်ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းက သူ့လမ်းသူသွား၊ ကျွန်မက ဘန်ကောက်မှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ညီမလေးကလာစောင့်နေမှာဆိုတော့ အပြင်ခဏထွက်ပီး သွားတွေ့ပါတယ်။ ကိုးရိုးကားရား နိုင်ပါတယ်၊ ဖိနပ်အမြင့်နဲ့လျှောက်ရတာအဆင်မပြေသလို. သူတို့ပြောတဲ့ထိုင်သံဝဲ၀ဲအင်္ဂလိပ်စကားကို နားလည် အောင်ကြိုးစားရတာလဲ တစ်မျိုး၊ အပြင်ထွက်တော့ ညီမလေးနဲ့တွေ့ပါတယ်၊ သူက ငိုလို့... မတွေ့တာလဲ ၃ နှစ်လောက်ရှိပီကိုး... ကျွန်မကတော့မငိုပါ။ အိတ်ထဲက မာမီထည့်ပေးလိုက်တဲ့သူ့အတွက်ပစ္စည်းတွေပေးပီး၊ အချိန်သိပ်မရတော့ အထဲပြန်ဝင်ရပါတယ်။ အထဲရောက်ပီး လေယဉ်ဆက်စီးဖို့စောင့်နေတဲ့အခါမှာတော့ တစ်ယောက်တည်း၊ မငိုရဲသေးဘူး.. ကြောင်တောင်တောင်နဲ့လိုက်ကြည့်နေတုန်း၊ လေယဉ်ပေါ်ရောက်မှ ဘာမှန်း မသိ အဲဒီအချိန်မှမျက်ရည်တွေ စီးကျလာတော့တာပါဘဲ။ မကြာဘူး..အစားသောက်လာကျွေးတော့ အငိုရပ်ပီး ဆက်စားပါတယ်။ ပီးတော့ mp3 လေးထဲက မြန်မာသီချင်းတွေကို နားထောင်လိုက်၊ မှေးခနဲ့အိပ်ပျော်လိုက်၊ လေယဉ်က ရမ်းခါပီး အောက်ကိုနဲနဲနိမ့်သွားတော့ ရင်ထဲမှာ ဟာ ကနဲ့ဖြစ်သွားတယ်.. အပေါ်ကနေ အသက်ရှုဖို့
အောက်စီဂျင်ပိုက်တွေပြုတ်ကျလာတယ်... ကျွန်မခါးပတ်ကိုတင်းတင်းဆွဲလိုက်ပီး ပြတင်းပေါက်လေးအပြင်ကို လှမ်းကြည့်တော့မဲမှောင်ပီး တစ်ချက်ချက် လျှပ်စီးလက်တဲ အနီရောင်အလင်းတန်းတွေတွေ့တယ်။ လေယဉ်က ခါလိုက် ပြန်ထိုးတက်လိုက်..အောက်နဲနဲနိပ်လိုက်နဲ့.. ကျွန်မမကြောက်ဖူး..ပျော်တောင်နေသေး..သူများတွေကို လှမ်းကြည့်တော့ မျက်စိမျက်နှာတွေပျက်နေကြတာများ.. ကျွန်မရီတောင်ရီချင်သေး.. (ဒါပေါ့ မျက်ကန်းတစ္ဆေမ ကြောက်ဆိုတာ).. နောက်တော့လေနဲနဲငြိမ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်... ကျွန်မနဲနဲထပ်မှေးလိုက်သေးတယ်။ ဒီဘက် လေယဉ်ကွင်းရောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ အညွှန်းကိုထပ်ဖတ်လိုက်တယ်၊ white card ဖြည့်ပီး.ပီ..
လေယဉ် အတက် ဘီးမြေပေါ်က အကြွနဲ့..ဘီးမြေပေါ်အချ..အချိန်ကိုကျွန်မအကြိုက်ဆုံးဘဲ.. အဲဒီခံစားမှုလေး ရဖို့အတွက် အချိန်ယူပီး check-in လုပ်နေရတာ၊ လေယဉ်မထွက်ခင်စောင့်နေရတာ၊ လေယဉ်ပေါ်က အနံ့တစ်မျိုး ပါနေတဲ့အစားတွေစားနေရလဲ.. လဲရတာတန်ပါတယ်လေ..(ဒါကြောင့်လဲနောက်ပိုင်းမှာလေယဉ် စီးရမယ်ဆို လာထားဘဲ) ပစ္စည်းတွေတွန်းလှဲပေါ်တင်ပီး ထွက်လာ တယ်။ ပထမ immigration ကောင်တာဖြတ်၊ နောက်အထပ် ကောင်တာတစ်ခုထပ်ဖြတ်၊ ပီးတော့ အဆောက်ဦးထဲကထွက်ပီး လမ်းမပေါ်တန်းရောက်တာနဲ့ ခပ်တည်တည်နဲ့မတ်တပ်ရပ် စောင့်နေလိုက်တယ်၊ ဘယ်သူမှမတွေ့ဘူး.. တစ်ခြားခရီးသည်တွေက လမ်းမကိုဖြတ် နောက်အဆောက်ဦးထဲထပ်ဝင်သွားတာ တွေ့တော့ ကျွန်မလဲ သူတို့နဲ့ ရောလိုက်သွားလိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ တော့ ကုန်းဆင်းလိုမျိုးလုပ်ထားတဲ့ နေရာမှာ ကျွန်မတွန်းလှဲအလေးချိန်နဲ့ စီးထားတဲ့ဖိနပ်နဲ့.. ပိန်ညောင်ညောင် ခန္တာကိုယ်က အင်အားနဲ့ မနိုင်တော့ ပါဘူး၊ အလုပ်သမားတစ်ယောက် သဘောကောင်းစွာ..လာတွန်းပေးပါတယ်.. နောက်သူများတွေတန်းစီလက်ပြ နေတဲ့နေရာလဲရောက်တော့ ဘယ်သူလာကြိုမလဲမသိပေမယ့် ကျွန်မရုံးက treasurer ကို သူများကြားမှာ banner ကြီးကိုင်ပီးရပ်နေတာလှမ်းတွေ့လိုက်ပါတယ်။ နဲနဲတော့ရှက်ပေမယ့် လာကြိုတဲ့သူရှိတော့ စိတ်ချမ်းသာ သွားတယ်။ သူပစ္စည်းတွေလာသယ်ပေးပီး၊ ကားပေါ်တင်၊ ကားကြီးကအကြီးကြီး၊ ကျွန်မ၀မ်းကွဲရဲ့ ယောက်ျား၊ ကျွန်မကိုတစ်ခါမှမမြင်ဖူးသေးတဲ့သူကိုပါ သူကခေါ်လာသေးတယ်။ တစ်လမ်းလုံးစကားတစ်ပြောပြောနဲ့ ၃ နာရီ လောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်၊ ၀င်းခြံကြီးတစ်ခုထဲကို ၀င်ခါနီး ကားရပ်လိုက်တော့၊ ကျွန်မအပြင်ကိုလှမ်းစပ်စု ကြည့်လိုက်တာ သေနတ် အကြီးကြီးတွေကိုင်ထားတဲ့ လူ ၃ ယောက်ကိုတွေ့တော့ ရဲစခန်းများလား လို့ထင်မိသေး တယ်။ နောက် ခြံထဲကိုကုန်းစင်းလေးဝင်ပီး...ဘယ်ကွေ့၊ ကုန်းတက်လေးပေါ်ရောက်တော့ အိမ်တစ်လုံးရှေ့မှာ ကျွန်မကိုချပေးပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေအထဲထိလိုက်ပို့ပေးပီး၊ အနားယူဖို့၊ အစားသောက်တွေ ရေခဲသေတ္တာထဲ မှာရှိ ကြောင်း၊ ညတော်တော်နက်နေလို့ ပြန်တော့မယ်အကြောင်းပြောပီး.. ကားပြန်ထွက်သွားပါတယ်...
ကျွန်မရောက်နေတဲ့အိမ်ကို တစ်ခန်းဝင်တစ်ခန်းထွက်လိုက်ကြည့်ပီး၊ ပစ္စည်းတွေချ၊ ပေါင်မုန့်ထုတ်ချပေးထား တော့ အဲဒါနဲ့ butter အတုံးသေးတစ်ခုယူပီးစား၊ tv ဖွင့်ပီး.... channel တွေအများကြီးဆိုတော့ ပျော်သား... Fashion tv ကို အကြာကြီးထိုင်ကြည့်နေသေးတယ်။ ပီးမှအိပ်ပျော်သွားတယ်။
နောက်နေ့ ကျွန်မ passport ကိုလာယူပီး၊ immigration officers တွေက work permit တွေနဲ့ ခတ္တနိုင်ငံသား ကတ်တွေလုပ်ပေးတယ်၊ လက်ဗွေနှိပ်တဲ့အချိန်ကလွဲလို့ immigration ရုံးတစ်ခါမှမသွားဘူး။ မြန်မာသံရုံးကို တော့ရောက်ပီး ၂ ပတ်လောက် မှာ ရုံးကကားမနက်အစောကြီးကျွန်မကိုခေါ်သွားတယ်၊ သွားချင်တဲ့နေရာသွား၊ လိုက်ပို့ပေးတယ်။ မြန်မာသံရုံးမှာကျွန်မရောက်နေတယ်ဆိုတာအကြောင်းကြား၊ passport မိတ္တူပေး ပီး ဟို သွားဒီသွာလုပ်၊ လိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ် ကားဆရာကနောက်ကတစ်ကောက်လိုက်ပီးကူသယ်ပေးပါတယ်။ ပီးတော့ ကားပေါ်တင်ပီ ကျွန်မကိုပြန်ခေါ်လာတယ်။ ရောက်ကတည်းက လိုလေသေးမရှိအောင် ရုံးကစီစဉ်ထား ပေးပါတယ်။ အစားသောက်က နေ့တိုင်း schedule ချထားတဲ့ အတိုင်း ကျွန်မနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်မယ့်သူတွေနဲ့ ခင်မင်မှုရအောင် အတူစားရပါတယ်။ နောက်အပတ်မှာတော့ ထမင်းနဲ့ငပိရည်နေ့တိုင်းညားတော့တာပါဘဲ။ ဘာချက်ရမှန်းလဲမသိ၊ မျက်နှာသစ်နေရာသစ်မှာ ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတော့၊ ဘာမှမချက်တတ်တာ လဲပါတယ်၊ မာမီကြော်ပေးလိုက်တဲ့ ချဉ်ပေါင်ကြော်ကို ငပိရည်ကြိုပီး နေတိုင်းအဲဒါနဲ့ပဲစားတာ ၂ပတ်တိတိ၊ မှတ် မှတ်ရရပါဘဲ၊
ပထမဦးဆုံး ဘုရားကျောင်သွားတဲ့ အပတ်မှာ ဆရာတစ်ယောက်က မြန်မာတွေ potluck ရှိတယ်၊ လာခဲ့ပါခေါ် တော့ ကျွန်မလဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သွားပါတယ်၊ ငတ်နေတာကိုးလေ.. ဘာမှမချက်တတ်၊ အစားအသောက်တွေ လဲ လွမ်းနေပီ၊ အဲဒီနေ့မှာ မြန်မာတွေအများကြီးတွေ့..ပျော်မှာဘဲလို့စိတ်ကူးက အချိန်ရောက်လို့ မိသားစု ၂ စုနဲ့ မြန်မာ ၄ ယောက်လောက်ထပ်တွေ့တော့... အော်.. ဒီလောက်ပဲလားလို့..
အဲဒီနေ့က ကြက်ဥချဉ်ဟင်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်းချင်းထောင်း (မညက်အောင်ထောင်းပါသည်)၊ အမဲသားဟင်း၊ ပဲပုပ်ကြော် နဲ့ စားကောင်းလိုက်သည်ဖြစ်ခြင်း..... နောက်ဆို မြန်မာအနဲစုလေး..စုကြမယ်ဟေ့ဆို မပျက်မ ကွက်ကိုသွားပါတော့တယ်။
သေနတ်ကြီးတွေတစ်ကားကားနဲ့ ရပ်နေတဲ့ခြံဝကအစောင့်တွေကို စိတ်ထဲမှာကြိတ်လှောင်လိုက်သေးတယ်။ မြန်မာတုန်းက တွေ့ဖူးတယ်၊ သေနတ်သာကိုင်တာ ကြည်ဆံမှမရှိတာ.. ..တစ်ရက်၊ လူတစ်ယောက် ခြံစည်းရိုး ကျော်ပီးဝင်လာတာ.... သေနတ်သံပြင်းပြင်းတစ်ချက်ကြားမှ တစ်ကယ့်သေနတ်တွေဆိုတာ သိတော့တယ်..
ခိုးဝင်လာတဲ့သူကို မပစ်ပါဘူး၊ သူ့ကိုခြောက်ပီး နံရံကိုပစ်တာ ဖြစ်ချင်တော့ သူက နှလုံးရောဂါရှိတော့ ဆေးရုံရောက်တော့ နှလုံးရောဂါနဲ့လန့်ပီးသေနေပီလေ..
ညဖက်ဆိုတံခါးပိတ်ပီးအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်.. မှုန်ပြပြ လျှောက်လမ်းလေးတွေကိုသာ ထွန်းထားတဲ့ မီးဆိုင်း လေးတွေနဲ့... အချိန်နဲ့ လှည့်နေတဲ့ အစောင့်တွေကိုတစ်ခါတစ်ခါတွေ့ရတယ်။
မနက်လင်းလို့တံခါးဖွင့်ရင်.. ခပ်ပြင်းပြင်းတိုးဝင်လာတဲ့ လေတွေနဲ့ တစ်ခါတစ်လေနှင်းမှုန်လေးတွေ မြူလေးတွေ
အိပ်နေရင်းကုတင်ပေါ်က ပြုတ်ပြုတ်ကျတဲ့ ညတွေရယ်၊ လမ်းလျှောက်တာနဲနဲများသွားလို့ ကြွက်တက်တဲ့ညတွေ ရယ်.. အိပ်မက်ထဲမှာ မြွေ၊ ဖား၊ တီကောင်၊ လူသေတွေလိုက်တယ်လို့ မက်တဲ့ညတွေရယ်..မှာ ညသန်းခေါင် ထထိုင် မာမီရေ...လို့အော်ငိုနေတာကလွဲလို့.. ကျန်တာတွေအားလုံး...ကိုယ့်အားထုတ်မှုပြောပလောက်အောင် မပါဘဲ..အားလုံးအဆင် ပြေနေခဲ့ပါတယ်...
Posted by စန္ဒကူး at 2:19 AM
potluck ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းခေါင်းစားရပါတယ်။ သတ်သတ်လွတ်ပဲယူသွားခွင့်ရှိတဲ့အတွက် စဉ်းစားရတာအမြဲပါပဲ။
မနက်မှခရမ်းသီးကိုပြားပြားလှီးပီး အိုးပူပူမှာကပ်ပီးကင်တော့မယ်ဆိုမှ တစ်ကယ်ချက်မယ့်မနက်မှာ gas ကုန်သွား လို့ဗျာများခဲ့ရပါသေးတယ်။
လျှစ်စစ်မီးဖိုနဲ့ပဲ အိုးထူထူ non-stick ကိုအပူပေးပီး ခရမ်းသီးတွေကိုပါးပါးလှီးနဲနဲအညိုရောင်သန်းအောင်ကင်လိုက်
ကြော်ပီးသားပဲပြားတွေကိုတော့ တြိဂံပုံလေးတွေဖြစ်အောင် ကတ်ကြေးနဲ့ကန့်လတ်ဖြတ်ညှပ်လိုက်ပါတယ်။
အနှစ်အတွက်ကိုတော့ ခရမ်းချဉ်သီး (၄)လုံး၊ ငရုတ်သီးအနီတောင့် ၁ တောင့်၊ ဂျင်းအနဲငယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူနီ
ပီးရင်တော့ ဆီနဲနဲနဲ့ မွှေးကြိုင်လာအောင်ကြော်ပါတယ်။ နနွင်းနဲ့ အရောင်တင်လေးလဲထည့်ဖို့မမေ့နဲ့အုံး..
ဟင်းထည့်မယ့်ပန်ကန်လုံးကြီးမှာ ညှပ်ထားတဲ့ပဲပြားတွေရယ်၊ ကင်ထားတဲ့ခရမ်းသီးတွေရယ်ကိုစီပြီးထည့်ထား လိုက်ပါနယ်။
ဲပြီးရင်တောင့် ခရမ်းချဉ်သီး ချဉ်စပ်မွှေးမွှေးကိုအပေါ်ကနေလောင်းချလိုက်ပါတယ်။
ကြွက်နရွက်မှိုလေးတွေကိုရေစိမ်ပါးပါးလှီးပီး... ပဲငံပြာရည်လေးနဲ့ နဲနဲလှော်လိုက်ပါတယ်။။ပီးရင်အပေါ်ကဖြူးထား လိုက်ပါ...
အဆင်သင့်ဖြစ်ပီဆိုရင်တော့ ကားပေါ်တင်ပီး... potluck ကိုသွားပါတယ်... အရင်တစ်ခါပဲသီးစုံဟင်းချက်တာ အများကြီး ကျန်ပေမယ့်ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ်တောင်မစားလိုက်ရပါဘူး..း)
Posted by စန္ဒကူး at 5:30 AM